အဈမတှနေဲ့ tik tok ကစားတိုငျးအရိုကျခံနရေတဲ့အကွောငျး ရငျဖှငျ့လာတဲ့စိုးပွညျ့သဇငျ - The Moon MM
ပွညျသူခဈြအနုပညာရှငျတဈယောကျဖွဈတဲ့ စိုးပွညျ့သဇငျကိုတော့ပရိသတျကွီးလညျးသိပွီးသားဖွဈမယျထငျပါတယျ။ သူမကတော့အနုပညာမြိုးဆကျကဆငျးသကျလာသူတဈယောကျဖွဈပွီး သရုပျဆောငျပိုငျးမှာသာမကအဆိုငျပိုငျးမှာလညျး ထူးခြှနျသူတဈယောကျပါ။ စိုးပွညျ့သဇငျဟာညီအဈမတှဖွေဈတဲ့ စိုးမွတျသူဇာ၊စိုးမွတျနန်ဒာနှငျ့စန်ဒီမွငျ့လှငျတို့နဲ့အတူ အပွငျစီးပှားရေးလုပျငနျတဈခုအနနေဲ့ မငျးသမီးပိုးထညျတိုကျကိုတညျထောငျပွီးအောငျမွငျမှုရရှိနတောဖွဈပါတယျ။
သူမကတော့ လတျတလောမှာအနုပညာအလုပျတှကေိုခဏတာရပျနားထားပွီး ပရိသတျတှနေဲ့အဆကျအသှယျမပွတျအောငျတော့ tik tokဗီဒီယိုလေးတှကေိုရိုကျကူးကာသူမရဲ့လူမှုကှနျရကျကနတေငျပေးလရှေိ့ပါတယျ။ လကျရှိမှာတော့စိုးပွညျ့သဇငျကညီအဈမတှနေဲ့ tik tok ကစားတိုငျးအရိုကျခံနရေတဲ့အကွောငျးကို ရငျဖှငျ့ပွောပွခဲ့ပါတယျ။.
အဲဒီအကွောငျးကိုတော့ စိုးပွညျ့သဇငျက “ငါ..tit tokဆော့တိုငျးအရိုကျမခံရတာမရှိပါလား”ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူရငျဖှငျ့ပွောပွခဲ့တာဖွဈပွီး ပရိသတျကွီးအတှကျပွနျလညျဖျောပွပေးလိုကျပါတယျနျော
Source:Soe Pyae Thazin
အစ်မတွေနဲ့ tik tok ကစားတိုင်းအရိုက်ခံနေရတဲ့အကြောင်း ရင်ဖွင့်လာတဲ့စိုးပြည့်သဇင်
ပြည်သူချစ်အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုးပြည့်သဇင်ကိုတော့ပရိသတ်ကြီးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်။ သူမကတော့အနုပညာမျိုးဆက်ကဆင်းသက်လာသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သရုပ်ဆောင်ပိုင်းမှာသာမကအဆိုင်ပိုင်းမှာလည်း ထူးချွန်သူတစ်ယောက်ပါ။ စိုးပြည့်သဇင်ဟာညီအစ်မတွေဖြစ်တဲ့ စိုးမြတ်သူဇာ၊စိုးမြတ်နန္ဒာနှင့်စန္ဒီမြင့်လွင်တို့နဲ့အတူ အပြင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်တစ်ခုအနေနဲ့ မင်းသမီးပိုးထည်တိုက်ကိုတည်ထောင်ပြီးအောင်မြင်မှုရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
သူမကတော့ လတ်တလောမှာအနုပညာအလုပ်တွေကိုခဏတာရပ်နားထားပြီး ပရိသတ်တွေနဲ့အဆက်အသွယ်မပြတ်အောင်တော့ tik tokဗီဒီယိုလေးတွေကိုရိုက်ကူးကာသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ကနေတင်ပေးလေ့ရှိပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့စိုးပြည့်သဇင်ကညီအစ်မတွေနဲ့ tik tok ကစားတိုင်းအရိုက်ခံနေရတဲ့အကြောင်းကို ရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။.
အဲဒီအကြောင်းကိုတော့ စိုးပြည့်သဇင်က “ငါ..tit tokဆော့တိုင်းအရိုက်မခံရတာမရှိပါလား”ဆိုတဲ့စာသားလေးနဲ့အတူရင်ဖွင့်ပြောပြခဲ့တာဖြစ်ပြီး ပရိသတ်ကြီးအတွက်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်နော်
မကွာမီ ထုတျဝတေော့မယျ့ စာအုပျအတှကျ အမှတျတရ လကျမှတျမြားထိုးပေးခဲ့ရာ မငျးသားဘဝက အျောတိုထိုးပေးရသညျ့ စံခြိနျကို ခြိုးလိုကျပွီဆိုတဲ့ ကြျောသူ